व्यक्ति विद्यासुन्दर र मेयर बिद्यासुन्दर फरक हो, व्यक्तिको पछि लागेर संस्था हराउनु हुँदैन — मेयर शाक्य
Admin | २०७५-०७-१९ | ३६० ६
१७ महिने कार्यकालमा थालिएका योजनाले आकार लिँदै
काठमाडौंं । प्राकृतिक व्यक्ति र कानूनी व्यक्ति एउटै होइन । काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले — प्राकृतिक व्यक्ति हारे पनि कानुनी व्यक्ति हार्नु नहुने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । सोमबार रिपोर्टस् क्लबमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मेयर शाक्यले भन्नुभयो — आफ्नो १७ महिने कार्यकालमा धेरै काम भएका छन् । सहरी समृद्धिमा प्रभाव राख्ने योजना बनाइएका छन् । यसरी काम गर्ने सिलसिलामा कहिलेकाहीँ भ्रामक विचारले बाधा सृजना हुन्छ । असल नियतबाट थालिएका काममा असयोग गरेर व्यक्ति विद्यासुन्दर शाक्यलाई असफल बनाउन खोज्नेले पनि अब सोच्नु पर्छ, मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यलाई असफल बनाउन खोज्दा, संघीयता कार्यान्वयनमा नै यसको असर पर्छ ।
आफूले थालेका कामका विषयमा भएका टिप्पणीमाथि चर्चा गर्दै मेयर शाक्यले भन्नुभयो — छरिएका कार्यालयलाई एउटै छानामुनि ल्याउन थालिएको केन्द्रीय कार्यालय पुननिर्माणमा मुद्दा प¥यो । यो जनप्रतिनिधि आएपछि थालिएको काम थिएन । यो काममा मेयर शाक्यले भीमसेन थापाको बागदरबार मास्न लागे भनेर चर्चा गरियो । अहिलेको भवन बागदरबार होइन । बागदरबार त्यसको नजिक थियो । त्यो पहिले नै भत्किइसक्यो । अहिलेको हरिभवन हो । अहिले भवनलाई बागदरबार हो भत्काउनु हुँदैन भन्नु भ्रम मात्र हो । सम्पदा संरक्षणतर्फ समुदायसँग मिलेर काष्ठमण्डपको पुननिर्माण भइरहेको छ । धरहरा पुननिर्माणले गति लिइरहेको छ । रानी पोखरी पुननिर्माण ठेकेदारको मुद्दा र बोलपत्र आव्हानमा पर्याप्त प्रतिस्पर्धी नभएकाकारण काम केही पछि धकेलिएको हो । यसलाई पनि चाँडै टुङ्गोमा पु¥याउँछौं । भौतिक पूर्वाधारतर्फ यस बर्षलाई पूर्वाधार बर्ष भनेर काम गरिरहेका छौं, सबै वडालाई आफ्नै कार्यालयमा स्थापित गर्न सबै बडा कार्यालय निर्माण गर्ने योजनामा काम गरिरहेका छौं, साक्षात्कारका क्रममा उहाँले — महानगरको बार्षिक बजेट नीति तथा योजना, योजना कार्यान्वयन गर्दाका सम्भावना र चुनौती, सहरी सुविधा वितरण, सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, साझेदारसँगको सम्बन्ध, राजस्व संकलनको अवस्थालगायतका विषयमा कुरा गर्नुभएको थियो ।
काम नभएका होइनन् तर महानगरका देखिने भागमा सडक विभाग मातहतका संरचना छन् । ती सडक भत्किन्छन्, मर्मत हुँदैनन् गाली महानगरले खानुपर्छ । मेलम्चीले सडक भत्काउँछ, समयमा मर्मत गर्दैन दोष हामीमाथि आउँछ । यी काममा हामी समन्वय गर्न सक्छौं गरिरहेका छौं तर हाम्रो क्षेत्राधिकार नभएकाले ठोस परिणाम देखाउन सक्दैनौं । हामीले भित्री सडकका कामलाई पूर्णता दिइरहेका छौं । कतिपय वडाले सडक निर्माणमा खर्च गर्नु पर्ने रकम खर्च गर्ने ठाउँ नभएर फिर्ता पठाएका छन् ।
फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मेयर शाक्यले भन्नुभयो — उपत्यकाका साझा समस्यालाई एउटै सोचबाट समाधान गर्न हामीले उपत्यकाका नगरपालिका फोरम गठन गरिसकेका छौं । फोहोर जिम्मा दिइसकेपछि समस्याका जिम्मेवारी हामीले लिनु पर्छ कि पर्दैन? जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? हामीले लगानी बोर्डसँग यस्ता केही प्रश्न गरेका छौं । यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ पाएपछि निर्णयमा पुग्छौं । यस अघि संभ सरकारसँग कुरा गरेर दिगो ल्याण्डफिल्ड साइटको पूर्वाधार विकास र बालाजुदेखि तीनपिप्लेसम्मको सडक निर्माणमा संघ सरकारको दायित्व हो भनेर बुझाएका छौं । त्यही अनुरुप काम हुने भएको छ ।
सहरी सुविधाको सहजता, वातावरणीय सुधारका पक्षमा बोल्दै मेयर शाक्यले — ५ वटा जेट मेसिन खरिद गरेर ढल व्यवस्थापन तथा र्पाक र विरुवामा पानी पु¥याउने काम भइरहेको, ५ वटा व्रमुर मेसिन खरिद प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो । सडक विस्तारको प्रसङ्गमा उहाँले — सार्वजनिकबाहेक अब सडक विस्तारका नाममा कसैको घर नभत्काउने बताउनुभयो ।
सहरी सुरक्षाका लागि सिसिटिभि क्यामरा जडान तथा यसका दृश्य नियमनमा नेपाल प्रहरीसँग साझेदारिता भइरहेको बताउँदै मेयर शाक्यले सहरलाई प्रविधि मैत्री बनाउन यस र्ष २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर काम भइरहेको बताउनुभयो । भौगोलिक सूचना प्रणालीलाई सेवा सुविधा व्यवस्थापनसँग पूर्ण आवद्ध गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
योजना निर्माणमा सहभागि बन्नोस् ः एकीकृत विकास सम्भव हुन्छ — मेयर शाक्य Previous Post
१५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि दर र १,६५१ डलर प्रति व्यक्ति आय भएको प्रदेश ३ मा नवजात शिशु मृत्यु दर १७ प्रतिशत Next Post